Apple inobvisa yechitatu-bato maapplication kubva kuReddit kubva kuApp Store kune iyo NSFW sarudzo | IPhone nhau
Apple inobvisa yechitatu-bato Reddit maapplication kubva kuApp Store kune iyo NSFW sarudzo
Rinopfuura vhiki rapfuura, Reddit yakatanga yaro yekutanga app yeApple app chitoro. Kunyangwe isu tichigona kufunga kuti ichiri chechipiri, kubvira makore maviri apfuura akatenga Alien Blue app izvo zvinotibvumidza isu kuwana chaiko nharaunda huru iyo iri Reddit uye kuve iyo "yepamutemo" kunyorera kwepuratifomu. Ichi chishandiso chitsva chinopa kuyedzwa kwemwedzi mitatu pamwe nekunyorera kweGoridhe. Kana nguva iyi yekuyedza yapera, tichafanirwa kubuda kana tichida kuenderera tichishandisa, kubhadhara $ 3,99 pamwedzi kana $ 29,99 pagore.
Ivo vanobva kuCupertino vangobvisa huwandu hukuru hwezvishandiso zvinotibvumidza kuwana Reddit, nekuda kweiyo NSFW zvemukati. Zvinoita sekunge kuitika kwakawanda kuti panongosvika iyo yeReddit application yepamutemo muApp Store, mamwe ese asiri iwo mapomendi ekushandisa akadzingwa mairi, asi zvese zvine tsananguro.
Chikonzero chikuru chakapihwa naApple chekubvisa ese echitatu-bato maapplication kubva kuReddit ndeyekuti kuvapo kwesarudzo iyo inotibvumidza kuratidza NSFW zvemukati zvinoenderana nezvinodiwa nemushandisi. Zvimwe zvekushandisa izvo zvakakanganiswa nesarudzo iyi ndeNarwhal uye Eggplant. Zvese izvi zvinoshandiswa zvinouya natively nebhatani rakaremadzwa nenzira iyi, nekutadza kuona zvinonyadzisira kana chero zvimwe zvemukati zvine mutauro wevakuru hazviratidzwe.
Iyo timu yekusimudzira yeiyo yepamutemo Reddit kunyorera, iyo yakasvika mazuva mashoma apfuura paApp Store yakabatwa neApple uye Iwe wakabvunzwa kuti ubvise iyo switch iyo inobvumira NSFW zvemukati kuratidza, kungofanana nemamwe maapplication, asi hapana nguva iwe wakambotyisidzirwa nekubvisa yako app kubva kuchitoro cheapp. Parizvino vese vanogadzira vari kushanda kubvisa iyi sarudzo uye nekudaro vanokwanisa kukurumidza kudzoka kuchitoro cheApple.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Apple inobvisa yechitatu-bato Reddit maapplication kubva kuApp Store kune iyo NSFW sarudzo
AirMail yakagadziridzwa uye ikozvino inoenderana neiyo iPad
Iyo HTC 10 ichave yekutanga Android inoenderana neAirPlay zviri pamutemo